Afhayeenka maleeshiyada Al-Shabaab oo sheegay in ay sii wadi doonaan weraradooda ka dhanka ah Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAfhayeenka maleeshiyada Al-Shabaab oo sheegay in ay sii wadi doonaan weraradooda ka dhanka ah Puntland
August 24, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Afhayeenka maleeshiyada Al-Shabaab, Shiikh Cali Dheere.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Afhayeenka maleeshiyada Al-Shabaab, Shiikh Cali Dheere ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay sii wadi doonto weeraradeeda ka dhanka ah deegaanada Puntland, sida uu ku sheegay wareysi uu siiyay idaacada wararka barobogaandada u faafisa Al-Shabaab ee Radio Andalus.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada qaraxyadii mataano ahaa ee dhawaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof.
Cali Dheere ayaa sheegay in ay Puntland u beegsanayaan sababtoo ah waxay saaxiib la tahay dowlada Itoobiya.
Dowlada Puntland ayaa dagaalo kula jirtay maleeshiyada Al-Shabaab tan iyo 2008-dii, maleeshiyada ayaa shirqoolo ku dishay dad badan oo Puntland u dhashay oo ay ku jiraan, culimo, shacab iyo saraakiil dowlada ah.
Tan iyo sanadkii 2013-kii Puntland ayaa toogasho ku fulisay xubno badan oo Al-Shabaab ahaa, kuwaasoo lagu eedeeyay in ay falal dilal ah ka geysteen gobolada Puntland.
Bilowgii sanadkan 2016-ka maleeshiyaad badan oo Al-Shabaab ahaa ayaa weerar kusoo qaaday xeebaha Badweynta Hindiya ee Puntland, ciidamada difaaca Puntland ayaa weeraradaas Al-Shabaab kusoo afjaray muddo labo asbuuc ah, iyagoo ku dilay howlgalkaas ku dhawaad 250 dagaalyahan oo Al-Shabaab ah, waxayna nolol ku qabteen ku dhawaad 70 kale.
July 6, 2016 Tirada dhimashada qaraxii isbiimaynta ahaa ee ka dhacay Baqdaad oo gaaray 250 qof